ISolanuz Plant ukuphela kwebhizinisi e-Asia Ephakathi eligxile ekukhiqizeni imikhiqizo eqediwe evela kumazambane - umagazini i- "Potato System"
Lesi sitshalo sigxile ekukhiqizeni amafries aseFrance namazambane agobekayo. Umthamo wokuklama ungamathani ayizinkulungwane ezingama-20 emikhiqizo eqediwe ngonyaka. Ibhizinisi liqale ukusebenza ngoMashi 2019 eTashkent.
Amafriji aseFrance e-Uzbekistan awona umkhiqizo ojwayelekile, isiko lokusetshenziswa kwalo alikakhiwa. ITashkent iyodwa isebenzisa cishe amathani angama-500 amafries aseFrance njalo ngenyanga. Ngaphezu kwalokho, amafriji aseFrance nama-flex anamandla amahle okuthumela ngaphandle: awekho amafemu afanayo emazweni angomakhelwane. Futhi umsebenzi wesikhathi eside we-Agrover LLC, umkhiqizi omkhulu wamazambane e-Uzbekistan, unikeze lesi sitshalo inqwaba yezinto zokwakha ezisezingeni eliphakeme.
Kuthathe cishe iminyaka emi-4 ukulungiselela ukwethulwa kwemigqa yokukhiqiza. Ngalesi sikhathi, kwahlanganiswa futhi kwahlolwa imishini yaseDashi, kwaqeqeshwa abasebenzi, kwenziwa iresiphi yangempela. Izilingo ezahlukahlukene zacishe zacishe zibe yiminyaka emithathu, okwenza ukuthi kukhethwe eyodwa kuphela enikeza ama-fries amahle waseFrance ezinhlotsheni eziyi-12.
Amazambane ama-oval ashelelayo, afanayo komunye nomunye njengamawele, ayagezwa futhi kuhlanzwe umusi ngemuva kokuhlungwa. Ngaphezu kwalokho - ukusika ngomshini kanye ne-blanching ephindwe kabili kuze kube sesigamu silungile. Ngemuva kwalokho izingcezu ziyoyithosa kohlelo lwamafreyimu ajulile, ukusuka lapho ziqonde khona ebusika obunzima, ziye egumbini lokuqandisa elishaqisayo. Amafutha othosiwe ajikeleza ohlelweni futhi adlule phakathi kwezihlungi: kudliwa cishe u-2 kg wamafutha ngamathani ama-250 amazambane. Ukulindela inkinga, uwoyela ungaphansi kokulawulwa kwekhwalithi eqinile futhi awunazo izinto eziyingozi empilweni.
Amafriji aseFrance afriziwe ngama-35 degrees ahlanganisiwe, ahlanganisiwe futhi athunyelwa ukuthengiswa. Umkhiqizo ucishe ukulungele ukusetshenziswa. Kwanele ukuyithosa imizuzu embalwa kwisithosi esijulile noma epanini lokuthosa, futhi izingcezu ezibomvana ezibabayo ezinomthamo obucayi obugundiwe zizogcwalisa ikhishi lakho ngephunga. Ngendlela, ngokungafani namafriji esiwajwayele - aphekwe ngezandla zethu noma sikhonzwe endaweni yokudlela, imikhiqizo yakwaSolanuz "ayithambisi" ngemuva kokupholisa, kepha ihlala ifana negolide ne-crispy.
Akukho lutho olungadingekile kuma-flakes amazambane ahlambulukile. Ayikho i- "chemistry": izithuthukisi zokunambitheka, izivimbelakuvunda, izinongo. Akukho ngisho nosawoti ovamile, umthengi uzofaka yonke into ngokwakhe, ngokuthanda kwakhe. Ama-Flakes alungiswa kusetshenziswa ubuchwepheshe obufanayo. Amazambane ahlanjululwe futhi ahlutshiwe ayanqunywa, abhuliswe nge-blanched futhi omiswe ngokuphelele. Kulokhu, izingcezu zilahlekelwa wumswakama wonke, ngemuva kwalokho zithunyelwa esigayweni, lapho zichotshozwa zibe yimpuphu. Futhi-ke - udinga nje ukufaka amanzi.
Umthamo walesi sitshalo uvumela ukucutshungulwa cishe kwamathani ayi-170 amazambane ngosuku. Benza cishe amathani angama-50 amafries aseFrance namathani ama-13 ama-flakes. Ulayini u-automated ngangokunokwenzeka, kunabasebenzi abayi-15 kushift ngayinye. Abasebenzi bensizakalo balandela umugqa, futhi abapakisha bapakisha imikhiqizo eqediwe. Kanye ngesonto, ulayini wonke uyama ukuhlanzwa.
I-LLC "Agrover" ihlela ukusebenzisa kuze kufike ku-80% wawo wonke amazambane asetshenziwe ukucubungula. Lesi sitshalo sizokhiqiza amathani angaphezu kwenkulungwane emikhiqizo eqediwe njalo ngenyanga.
Tags: ukucubungula amazambaneUmkhiqizo wama-fries waseFranceUzbekistan
Ama-chip kulabo abadla ukudla
I-microcensus yezolimo izobanjelwa eRussia ngo-2021